Siyaasadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
SD oo kalsooni kala noqosho ku oogay Stefan Löfven
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa maanta horgeeyey baarlamaanka Sweden mooshin kalsooni kalo noqosho oo ka dhan ah ra’iisalwasare Stefan Löfven.
Moderaterna: ha la dhimo safka daryeelka cafimaadka
Moderaterna oo doonaya in dalka oo dhan laga mamnuuco tuugsiga
Xisbiga Moderaterna ayaa doonaya in la adkeeyo cinqaabta ka dhanka ah guryo jabsashada iyo in la kordhiyo dembiyada cinqaabtooda noqoto dal ka masaafurin si ka badan sida ay maanta tahay.
Moderaterna oo dooneyna in jinsiyadda lagala noqodo dadka argagxisada ah
Fadeexaddii hey’adda gaadiidka oo sababtey in xogheyntii Löfven iscasisho
Emma Lennartsson oo aheyd xogheyntiisa gaarka aheyd reysal wasaarahe Stefan Löfven ayaa is casishey ka dib markii warar dheeraad ah oo cusub laga heley fadeexaddii la xiriirtey isgaarsiinta IT-ga.
Xoghayntii Löfven oo is casishay
Xukumadda oo ballanqaaday shaqo la'aan ka hooseysa boqolkii lix
Xukumadda ayaa saadaalinaysa in shaqo la’aanta hoos u dhaci doonto oo noqon doonto 5,9 boqolkii sannadka soo socda.
Inta badan xubnaha ugu sareeya xisbiga Moderaterna gobolka Stockholm oo aan kalsooni ku qabin hoggaamiye Anna Kinberg Batra.
MUF oo sheegay in aanu kalsooni u qabin hoggaamiyaha Moderaterna
Hoggaamiyaha Moderaterna oo lagu dhagan yahay
Dalabyo is casilaad.
Todobaadkan waxaa iska soo dabo dhacayey dalabyo ka imaanayey xubno sare oo ka tirsan moderaterna kuwaas oo ugu baaqaya hoggaamiyaha xisbiga in ay is casisho.
Anna Kinberg Batra avgår inte
Xisbiga KD oo ka kacay kursigii wadahadalkii siyaasadda difaaca
Xisbiga Kristdemokraterna ayaa maanta shaaciyey in ay uga baxeen wadahadalkii xukumadda iyo M iyo C ee ku saabsanaa dhaqaale dheeraad oo lagu kordhiyo wasaaradda difaaca, sida ay sheegtay hoggaamiyaha xisbiga KD Ebba Busch Thor.
Moderaterna oo raba in kaamarooyin lagu rakibo 23 xaafadood
Xisbiga Modaraat-ka (M) ayaa raba in qalabka sawirada qaada lagu xiro 23 goobood oo dalkaan Sweden ku yaal kuwaas oo ay rabshaduhu ku badan yihiin, sida lagu sheegey barnaamijka wararka ee ka baxa telefishinka TV4.
Boliska oo loo ogalaaday in ay kaamero ku illaaliyaan Rinkeby iyo Tensta
Åkesson oo ka hadlay kala soocnaanta iyo sharciga loo hoggaansamo
Jimmie Åkesson hogaamiyaha Sverigedemokraterna oo sabtidii qobad ka jeedinayey deeeganka ayaa ka hadlay arrimo la xiriira kala soocnaanta iyo u hoggaansiga sharciga.
Löfve: gacan daga baan ku qabaneynaa burcadda
Löfven: gacan adag baan ku qabaneynaa burcadda
Todobaadka siyaasadda Järva.
Gacan adag oo lagu qabto burcadda iyo dadaal cusub oo lagelinayo iskuulka ayaa ka mid ahaa waxyaabahii uu Stefan Löfven ku soo qaabtay qodbaddiisa todobaadka siyaaadda ee lagu qabtay degaanka Järva.
Sjöstedt (V) oo ka hadlay masraxa todobaadka siyaasadda Järva
Hoggaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt ayaa ka hadlay in la kordhiyo canshuuraha laga qaado dabaqadda sare iyo in dib loo soo celiyo canshuurta ra’sumaalka aan guurin iyo midda dhaxalka, sidoo kale in la dhimo dhaqaalaha dib loo celiyo ee canshuurta dahsoon.
Lööf oo sheegtay inay doonayso kor u qaadidda ammaanka xaafadaha
Todobaadka siyaasadda Järva oo albaabka loo furi doono sabtida
Siyaasadda iyo doorashada.
Maalinta sabtida deegaanka Järva oo dhacda galbeedka waqooyi ee Stockholm waxaa ka bilaabanaya wax loo baxiyey todobaadka siyaasadda.
Vad som får ickeväljare att börja rösta